Fil d'actualités du 23/03/2018
23/03/2018 - 14:00 : RFC: Hatao ny 13 aprily-21 aprily izao ny RFC na ny “Rencontres du film court Madagascar » eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika fohy, andiany faha-6, ka 24 eo ny mpandray anjara ary ny 10 amin’ireo dia Malagasy avokoa.
23/03/2018 - 13:00 : DIPLOMASIA: Nanao veloma ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny masiovohon'i Etazonia Robert T. Yamate
23/03/2018 - 12:30 : LALAON'IARIVO: Hisy ny hetsika ara-pialam-boly antsoina hoe "Lalaon'Iarivo" eny amin'ny Kianja Monisipalin'i Mahamasina 21-22 aprily izao.
23/03/2018 - 12:00 : FITAZONANA AM-PONJA: Any amin'ny "violon" sy toerana manokana eny anivon'ny Biraon'ny polisim-pirenena sy ny zandary no hitazonana ireo olona tokony hampidirina am-ponja vonjimaika nanomboka ny 19 martsa noho ny grevin'ny mpandraharahan'ny fonja.
23/03/2018 - 11:30 : ORINASA AAA-TIKO: Mitaraina ny mpiasan 'ny AAA, miantso ny tompon 'andraikitra ara-panjakana sy ny ao Vakinakaratra mba hamaha ny olana mianjady amin'izy ireo izay tratry ny "chômage technique".
23/03/2018 - 11:00 : RNM SY TVM: Diso ny fanapariahana hafatra fohy na "sms" milaza ny fahazoan'ny laharana iray mahazo ilay hafatra fa nahazo fiara tsy mataho-dalana, ary alaina any amin'ny RNM sy TVM Anosy.
23/03/2018 - 10:30 : Hahemotra amin’ny faha 17 sy 18 aprily ny fifaninanana handraisana mpitsabo mpanampy na « paramédicaux » nivoaka avy amin’ny sekoly tsy miankina tokony hatao ny 27 sy 28 marsa izao.
23/03/2018 - 10:00 : TATITRA MOMBA NY RIVODOZA ELIAKIM: Araka ny tatitra farany navoakan'ny BNGRC dia 21 no maty, 50 872 traboina, 19 439 nafindra toerana.
23/03/2018 - 09:30 : DIPLAOMA HOSOKA: Nisy diplaoma bakalorea hosoka tao amin’ny oniversiten’i Mahajanga nandritra ny fandraisana ny antotan-taratasy hidirana ho mpianatra taona voalohany farany teo. Nametraka fitoriana eny amin’ny tribonaly ny Oniversite.
23/03/2018 - 09:00 : FITATERANA: Manambana hitokona ny zotra mampitohy an'Antananarivo sy Arivonimamo ny anio zoma 23 martsa noho tsy fankasitrahany ny famindrana azy ireo eny Andohatapenaka.
Archive du 20170805
“Boeing” nivadika teny Ankazobe Efa lany “visite” tamin’ny 2015
Nivoaka tamin’ny fahanginany manoloana ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina niseho tany Ankazobe ny sampan-draharaha momba ny fitsarana ny fiara, ka nisy ny fanazavana natao teny Alarobia omaly.
Ravalomanana tao Mananjary Velom-panantenana ny rehetra
Nihazo an’i Manjary ny Filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana, taorian’ny nahavitan’ny Kongresim-paritry ny Antoko ny antoko Tiako I Madagasikara tao Manakara ny alakamisy teo.
Politika maloto Vonoina ny olon’ny TIM
Miisa 4 ireo olon’ny antoko Tiako i Madagasikara no maty na novonoina tamin’ny fomba feno misitery tao anatin’ny volana vitsy.
Fahapotehan’ny firenena ankehitriny Toy ny tamin’ny ady lehibe faharoa, hoy ny GTL
Ao anatin’ny firenena 5 mahantra indrindra maneran-tany isika, hoy ny Gasikara Tanindrazana Lovasarobidy na ny GTL izay tarihin’ny filohany Jules Andriamaholison, tetsy amin’ny Radama Hotel Isoraka omaly.
Ambohidahy Ambatonakanga Nohavaozina ny fatsakana
Tontosa omaly zoma 4 Aogositra 2017 ny fanokanana fotodrafitr’asa fatsakana rano teny amin’ny fokontany Ambohidahy Ambatonakanga.
Ady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro Hara-kiasa akaiky ny tetikasa Miary sy ny Meteo
Manomboka hita taratra mivantana eto amintsika ary misy fiantraikany avy hatrany amin’ny fambolena mihitsy amin’izao fotoana izao ny fiovaovan’ny toetr’andro eto amintsika.
Fifidianana filohan’ny FIZAFATO Miantso fitoniana ny Zanak’Androy
Anisan’ny vaovao tena nahoraka teto amintsika tamin’ity herinandro ity ny fifanolanana misy eo amin’ireo samy mpikambana ao anatin’ny FIZAFATO na ny Zanaky ny Faritany Toliara.
Tandremo tsy ho marionety
Mbola tsy afaka an-tsain’ny maro ny lozam-pifamoivoizana niseho tany Ankazobe tamin’ny fiandohan’ny herinandro, hany ka lasa tsy dia mahasarika ny saina loatra ireo dindona fifandirana lava amin’ny samy foko izay niseho tato ho ato izay.
Bajaj ao Mahajanga Miditra “fourrière” avy hatrany izay tsy ara-dalàna
Mihamitombo isa hatrany ireo bajaj miasa ao an-drenivohitr’i Mahajanga amin’izao fotoana izao.
Sekoly tsy manara-dalàna Manana tapa-bolana hanamboarana taratasy
Hifarana ny 20 Aogositra ho avy izao, raha araka ny loharanom-baovao azo rehefa naharitra herinandro maromaro ny fe-potoana nomena ireo sekoly tsy miankina tsy manara-dalàna teto an-drenivohitra ka nahazo fampitandremana avy amin’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena.
Fampandrosoam-pirenena Mbola lavitra ezaka, hoy ny mpampianatra mpikaroka
Nanazava ny lohahevitra hoe « Ny Ntaolo, ny sera sy ny fampianarana izany ankehitriny » ny mpampianatra mpikaroka, Jean Jules Harijaona,
Festival Lampogno Tadiavina mpanao politika hosomparana
Nampahafantarina tetsy amin’ny tranom-bokim-pirenena etsy Ampefiloha ny alakamisy teo ny fandaharam-potoana mandritry ny andiany faha 10 amin’ny festival Lampogno izay hatao any Antsohihy ny 24 ka hatramin’ny faha 27 aogositra izao.
Fanafihana “Grossiste” teny Antsobolo Olona iray naratra
Mihamahazo vahana hatrany ny tsy fandriampahalemana eto an-drenivohitra sy ny manodidina.
ACMIL Antsirabe Namoaka manamboninahitra 78 isa
Manamboninahitra niisa 78 no navoakan’ny Akademia Miaramila Antsirabe omaly. Mizara ho andiany roa izy ireo dia ny andiny mivantana faha 38 nisalotra ny anarana “Fanjiry”, izay niisa 67 mianadahy ary ny andiany manokana niisa 11 nisalotra ny anarana “Lafatra”.